Suurtagal ma tahay in la raadiyo dhammaan dhabarkaaga dhabarkaaga Google?
Sida ay ku muujinayso, bogagga shabakada ee go'aansaday inuu shaqaaleysiiyo qaar ka mid ah la-taliyayaasha SEO-yada ama hay'adaha ku-meel-gaadhka ah ee aan ogayn cid saddexaad, inta badan waxay ku dhammaanayaan liiska qiimeynta iyo ganaaxyada Google. Cilmi-baarayaasha aan khibradda lahayn ayaa sida caadiga ah ku ballanqaadaya macaamiishooda kobaca sicir-korodhka ah waxayna dhisaan xiriiro iyagoo isticmaalaya farsamada spammy.
Tani waxay udhigantahay naqshadaynta meel-ka-baxsan taas oo la siiyay xirfad ahaan iyo mid aan habbooneyn iyo doorka dhabarka ah ee geedi socodkan. Waxaa intaa dheer, waxaan ka wada hadli doonaa sida dhabarka u xun uu u saameyn karo darajadaada iyo sumcada boggaaga.
Sidee loo helaa dhabarka dambe ee xun?
Weligaa ma ku fekereysaa sida dhabarka u xun uu uga duwanyahay kuwa wanaagsan? Jawaabta saxda ah ee su'aashan waxay kuxirantahay tayada bogga ay ku qoranyihiin. Dib-u-qabashada tayada hoose ayaa si fudud loo ogaanayaa. Si kastaba ha ahaatee, marmarka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad sameyso baaritaanka shabakada si aad u fahamto sababta dhabarka si xun u saameeyeen goobtaaga SEO.
Waxaa jira farsamooyinka qaarkood sida aad u kala sooceyso ujeedka tayada tayada sare leh iyo liita:
Xidhiidhada laga helo ilaha webka oo billaabay inuu abuuro backlinks
) Marka fariimaha lagu dhajiyo websaydh aan cod lahayn oo aan lahayn xogta cilmi baarista, ilaha webka ee noocan oo kale ah waxay u adeegi karaan oo kaliya inay isku xiraan boggag kale. Haddii websaydh la dhigo nidaamka maareynta WordPress ee mawduucyada loona isticmaalo mabda 'TwentyEleven theme, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa tayada hoose, tayada qarsoodiga ah ee la abuuray ujeedo ah inaad lacagtaada soo saarto.
Xiriirada faallooyinka bogagga kale
Waxaa laga yaabaa inaad aragtay qaabkan dhismaha isku xidhka bogagga. Barnaamijyada si toos ah u soo saara backlinks waxay isticmaalaan bots si ay u buuxiyaan faallooyinka kale ee bogga. Faallooyinkaan waxay caadi ahaan u muuqdaan dabeecad sababtoo ah nidaamyada is-bedelka ahi waxay noqdaan kuwo caqli-gal ah maalmahayaga. Faallooyinkan spam waxay noqon karaan kuwo shakhsi ahaaneed oo xitaa kujira magaca qoraaga. Xidhiidhada spam ee faallooyinka laguma soo celin karo qiimahaaga xiriiriyahaaga.
Linkins oo ku hareereysan tayada hoose, qoraallada kala duwan
Sida caadiga ah, ilaha webka ee la abuuray ujeedo isku xirnaanshaha waxay leeyihiin waxyaabo aan macno lahayn ama si sahlan loo daabacan karo shabakadaha kale. Qaar ka mid ah haya'daha dhismaha khiyaamo khaas ah ayaa si gaar ah u kobciya boggaga maado kasta si ay u dhistaan ​​xiriiryo iyaga oo ka gudbaan xiriirada la helay sida kuwa ku habboon. Inta badan Google waxay ogaan doontaa muddo gaaban gudaheeda waxayna ku dhufatay ilaha websaydha rigoore. Sidaa darteed, waxaad heli doontaa gadaal kale oo tayo hoose leh oo loogu talagalay boggaaga.
Sidee loola socdaa dhabarkaaga tayada hooseeya?
Qaybta hore, waxaan ka wada hadalnay sida loo kala saaro dhabarka tayada hooseeya. Hadda, waa wakhti aad ku fekereyso sida loo xakamayn karo xidhiidhada xun xun si looga fogaado darajooyinka darajooyinka iyo ganaaxyada Google.
Habka ugu fudud ayaa ah inaad la xiriirto milkiilaha bogga halkaasoo isku xirka la naqshadeeyo oo la weydiiyo inuu ka saaro. Waxay u badan tahay inaad la kulmi doonto websaydhiyiin kaa codsanaya inaad bixiso kharashka xiriirka. Xaaladdan, ikhtiyaarka ugu fiican wuxuu noqon doonaa in la iska daayo xiriirka aan la rabin ee leh Google Link Disavow Tool haddii aan laga saari karin gacanta Source .